"ငါတို့ ကွာရှင်းကြရအောင်…." ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Te Te Lay
"ငါတို့ ကွာရှင်းကြရအောင်…." လို့ ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့
သူမက တည်ငြိမ်စွာပဲ.. "ဘာလို့ ကွာရှင်းချင်တာလဲ မောင်…"
ကျွန်တော် သူမမေးခွန်းကို ရှောင်ရှားခဲ့ပါတယ်..။
အဲ့ဒီညက ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စကားမပြောခဲ့ကြပါဘူး..။ သူမကတော့ တစ်ညလုံး ငိုနေပါတယ်..။
ကျွန်တော့်မှာ သူကျေနပ်စေနိုင်မယ့် အဖြေမျိုးမရှိပါဘူး..။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် Jane ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို ချစ်မိနေပြီလေ..
ဒါကြောင့် ကွာရှင်းစာချုပ်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့အိမ်..ကား..နဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ရှယ်ယာ (၃၀%) ကို သူမကို ပေးဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်..။ သူမ ကွာရှင်းစာချုပ်ကို တစ်ချက်ကြည့်ပြီး အပိုင်းပိုင်း အစစ ဖြစ်အောင် ဆုတ်ဖြဲခဲ့ပါတယ်..။
ကျွန်တော့်ဘေးမှာ ၁၀ နှစ်လောက် အတူတကွ ရှိလာခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီးဟာ အခုဆို ကျွန်တော့်အတွက် သူစိမ်းတစ်ယောက် ဖြစ်လို့နေခဲ့ပါပြီ..။
တစ်နေလုံး Jane နဲ့ လည်ပတ် ပျော်ရွှင်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော်အိမ်ကို နောက်ကျစွာ ပြန်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာ သူမဟာ တစ်စုံတစ်ခုကိုရေးနေပါတယ်..။ ကျွန်တော် ညစာ မစားတော့ပဲ အခန်းထဲကို တန်းဝင်ပြီး အိပ်စက်ခဲ့ပါတယ်..။. ချက်ချင်းပဲ အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်..။
နောက်တစ်နေ့မှာ သူမ ကျွန်တော့်ဆီက ဘာမှမလိုချင်တဲ့အကြောင်း…၊
ဒါပေမယ့် မကွာရှင်းမီ တစ်လအတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် တတ်နိုင် သလောက် သာမန်ပုံစံအတိုင်း ပုံမပျက် နေထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို တောင်းဆိုပါတယ်..။ သူမ အကြောင်းပြချက်က ရှင်းပါတယ်..။ ကျွန်တော်တို့ သားလေး ဒီလ ထဲမှာ စာမေးပွဲရှိတောကြောင့် ဒီကိစ္စကြောင့် သူ့ကို စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေချင်လို့ပါတဲ့..။
ဒါတွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက် အခက်အခဲမရှိပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် သူမနောက်တစ်ခု ထပ်တောင်းဆိုပါတယ်..။ အဲ့ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ မင်္ဂလာဦးညက သူမကို ပွေ့ချီတဲ့ပုံစံအတိုင်း မနက်တိုင်း သူမကို အိပ်ယာထဲကနေ အိမ်ရှေ့ တံခါးပေါက်ဝအထိ ပွေ့ချီပြီး ပို့ပေးဖို့ပါ..။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေမှာ ဘာအနှောင့်အယှက်မှ မဖြစ်စေချင်တာနဲ့ ကျွန်တော် ဒါကိုလည်း လက်ခံခဲ့ပါတယ်..။
ဒီကွာရှင်းဖို့ ဇာတ်လမ်းကို စတင်ကတည်းက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အထိအတွေ့မရှိခဲ့ကြပါဘူး.။ ဒါကြောင့် ပထမဦးဆုံးနေ့.. ကျွန်တော် သူမကို ပွေ့ချီလိုက်တော့.. ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်လုံး ရှက်နေကြပါတယ်.. ။ ကျွန်တော်တို့သားလေး က နောက်ကနေ "ဖေဖေက မေ့မေ့ကို ပွေ့နေပြီဟေ့…" ဆိုပြီး နောက်ကနေ လက်ခုပ်တီးနေပါတယ်..။ သားလေးရဲ့စကားဟာ ကျွန်တော့်ကို နာကျင်စေ ခဲ့ပါတယ်..။ အိပ်ခန်းထဲကနေ ဧည့်ခန်း..ပြီးတော့ အိမ်ရှေ့ ကျွန်တော်သူမက ပွေ့ချီပြီး ၁၀ မီတာလောက် လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်..။ သူမက မျက်လုံးကို ပိတ်ထားပြီး ကျွန်တော့်ကို တိုးတိုးလေးပြောပါတယ်..။
"ကွာရှင်းမယ့်အကြောင်းကို သားလေး မသိပါစေနဲ့…"
ကျွန်တော် ခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်.. ကျွန်တော် သူမကို တံခါးပေါက်ရဲ့အပြင်မှာ ချလိုက်တယ်..။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် ရုံးကို ကားမောင်းထွက်ခဲ့တော့တယ်..။
ဒုတိယနေ့က ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးအတွက် သိပ်အခက်အခဲမရှိပါဘူး..။ သူမဆီက ရေမွှေးနံ့ကို ကျွန်တော် ရှုရှိုက်မိနေပါတယ်..။ ကျွန်တော် အခုမှ သတိထားမိတာက သူမက မငယ်တော့ပါလား…။ မျက်နှာမှာ အရေးအကြောင်း ငယ်လေးတွေ တွေ့နေရပြီ..။ သူမ ဆံပင်တွေလည်း မီးခိုးရောင် သန်းနေပါပြီ..။
တစ်မနက်မှာ သူမ ဘာဝတ်ရမလဲဆိုတာကိုရွေးနေရင်း သက်ပြင်းချလိုက်ပြီး "အ၀တ်တွေက အကုန်ချောင်ကုန်ပြီ" ဆိုပြီး ညင်းညူ လိုက်ပါတယ်…။ ကျွန်တော်အခုမှ သတိထားလိုက်မိပါတယ်..။ သူမဟာ အရင်ကထက် အတော့်ကို ပိန်ကျသွားခဲ့ပါတယ်.။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အတွက် သူမကို ပွေ့ချီရတာ ပိုလွယ်လာတယ်လို့ ထင်နေမိတာကိုး..။
သူမဟာ သူမရဲ့ ခံစားမှုတွေ နာကျည်းမှုတွေကို ရင်ထဲမှာ ပိတ်လှောင်ထားတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။ မရည်ရွယ်ပဲ ကျွန်တော် သူမရဲ့ ခေါင်းကို ကြင်နာစွာ ပွတ်ပေးမိလိုက်ပါတယ်..။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ သားလေးက အခန်းထဲဝင်လာပြီး
"ဖေဖေ… မေ့မေ့ကို ချီဖို့ အချိန်ကြပြီ…."
သူမက သားလေးကို သူမအနီးခေါ်လိုက်ပြီး တင်းကျပ်စွာ ဖက်ထားလိုက်ပါတယ်..။ ကျွန်တော် ချက်ချင်းမျက်နှာလွဲလိုက်ပါတယ် ..ဘာလို့လဲတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကွာရှင်းချင်တဲ့စိတ် ဒီအချိန်လေးမှာ ပြောင်းသွားမှာ စိုးလို့ပါ..။
သူမအတော်လေးကို ပိန်ကျလာတာ ကျွန်တော့်ကို ၀မ်းနည်းစေခဲ့ပါတယ်..။
မနက်ဖြန် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ကွာရှင်းမယ့်ရက် ...
ကျွန်တော့် စိတ်ထဲမှာ ၀မ်းသာသလိုလို ၀မ်းနည်းသလိုလို ....
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် သူမကိုပွေ့ချီပြီး ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းချင်းကို ခက်ခဲစွာ လျှောက်လှမ်းနေရပါတယ်..
ဧည့်ခန်းထဲရောက်တော့ သူမက ကျွန်တော်လက်ထဲက ဆင်းပြီး
စားပွဲထဲကနေ စာရွက်သုံးရွက်ထုတ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်..
တစ်ရွက်က သူမကိုယ်တိုင်ရေး ပြီး လက်မှတ်ထိုးပေး ထားတဲ့ ကွာရှင်းစာချုပ်
နောက်တစ်ရွက်က သူမကိုပေးမယ့် ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံး သားကိုပေးဖို့နဲ့ သားကို အရွယ်ရောက်သည်အထိ ကောင်းမွန်စွာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့မှာကြားတဲ့သေတမ်းစာ
ကျန်တဲ့တစ်ရွက်က သူမရဲ ဆေးစစ်မှု မှတ်တမ်းဖြစ်ပြီး သူမဟာ သွေးကင်ဆာရောဂါကို ခံစားနေရပါတယ်တဲ့….။
"မင်း..ဒါ…ငါ့ကိုဘာလို့ အရင်က မပြောတာလဲ…."
"ဒီရောဂါကြောင့် မောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာကို မလိုလားလို့ ပါ … ပြောမပြမိတာ ခွင့်လွှတ်ပါ"
ကျွန်တော် ချက်ချင်းပဲ ပြေးထွက်ခဲ့ပြီး ရုံးကို ကားမောင်းခဲ့ပါတယ်..။
ကျွန်တော် ချစ်တဲ့ Jane ဆီကို ပါ .
"Jane ကိုယ့်ကို ခွင့်လွတ်ပါ..။ ကိုယ် ကိုယ့်ဇနီးကို မကွားရှင်းနိုင်ဘူး…"
သူမကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော့် နဖူးကို လာစမ်းပါတယ်..။
"တောင်းပန်ပါတယ်.. ကိုယ်တို့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ ပျင်းဖို့ကောင်းရင်ကောင်းနေပါလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဟာ ကိုယ်ယူထားတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့လက်ကို သေသည့်တိုင်အောင် ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ.."
Jane အံ့သြတုန်လှုပ်စွာနဲ့ ကျွန်တော့်ပါးကို တစ်ချက်ရိုက်ပြီး မျက်ရည်တွေနဲ့ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်..။
ကျွန်တော် ကားမောင်းပြီး အိမ်အပြန်လမ်းမှာ ပန်းဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ ရပ်ပြီး ပန်းတစ်စည်းမှာလိုက်ပါတယ်..အရောင်းစာရေးမလေးက ကျွန်တော့်ကို ကဒ်ထဲမှာ ဘာရေးပေးရမလဲမေးတော့… .ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်ပြီး
"ကိုယ် မင်းကို မနက်တိုင်း သက်ဆုံးတိုင်အောင် ချီပိုးခွင့်ပြုပါ..…"
ကျွန်တော် ညနေ အိမ်ပြန်ရောက်တော့.. ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ ပန်းတွေနဲ့ပါ… ကျွန်တော် ပြုံးလိုက်ပြီး ပျော်ရွှင်စွာ ကျွန်တော်တို့ အိပ်ခန်း အပေါ်ထပ်ကို ပြေးတက်ခဲ့ပါတယ်..။ အိပ်ယာပေါ်မှာတွေ့လိုက်ရတာကတော့ ကျွန်တော် လုံးဝ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခု………. သူမဟာ သေဆုံးနေခဲ့ပါပြီ….။
ကျွန်တော်ဟာ ကွာရှင်းဖို့ ကိစ္စကို လုံးပန်းနေတာနဲ့ပဲ သူမ ကင်ဆာရောဂါခံစားနေရမှန်းမသိခဲ့ပါဘူး..။ သူမဟာ ဆရာဝန်က ပြောထားသည့် နေရမည့် သက်တမ်းကာလ တစ်လအတွင်းမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့မယ့် ကျွန်တော်နဲ့ သားလေးကြားမှာ ဘာအမုန်းတရားမှ မရှိအောင် ဖန်တီးခဲ့တာပါ..။ သူမ သေဆုံးပြီးမှ သာကျွန်တော်နဲ့ Jane တို့ လက်ထပ်တယ်ဆိုရင်လည်း သားလေးအမြင်မှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ အဖေကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေမှာပေါ့…။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြပါစေ လို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်….။
Credit to (Aung Tun Oo)